Madaxda Great ha oo dhan ma samayn on iyaga u gaar ah - Rule News
Madaxda Great ha oo dhan ma samayn on iyaga u gaar ah
Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “Madaxda Great ha oo dhan ma samayn on iyaga u gaar ah - sidaas darteed maxaa u oofin aad u badan?” waxaa lagu qoray by Stefan Stern, waayo theguardian.com on Monday 21 December 2015 13.21 UTC
Yaa ka mas'uul ah tareen Virgin qalad? Ma Sir Richard Branson. Kumana kaxeeya tareen ama diyaarad umado ama shactarada biiro on your cable TV, mana bangiyada lacagta ee account Virgin aad. Laakiin weydiin punter kasta oo "waddaa" shirkadda oo idinkuna waxaad ogaan waxa jawaab u noqon doonaa: hinbiriirsiga in, bloke la laalo in kicinta ama fanaaniinta-dharka ka dhisan a sool.
Waxaan nahay eheen oo dhan, geysanaya fal quraafaad ah ee shakhsiyadda Solo bartey maaraynta dhinac kasta ah shirkad weyn. falanqeeyayaasha Financial, aqoonyahano, saamileyda, shaqaalaha, saxafiyiinta - waxaan fixate on aqoonsiga CEO. "Marc Bolland jeedin karaa Marks & Spencer agagaarka?"Waxaan ku weydiin. "Paul Polman beddesho doonaa Unilever?"Hadalladaasu ma aha kuwa su'aalo runtii aad u macquul ah.
abaal xad dhaafka ah hogaanka, mar kale iftiimiyeen toddobaadkii la soo dhaafay by warbixin ka Institute Chartered ee Shaqaalaha iyo Horumarinta (CIPD), xoojiyo fikradda ah in baananku yihiin "kale", a nooc gooni. Tani waa dhif run. Wixii ka duwan kasta, Hogaamiyaha kexeeyey oo caawiya keeno ku saabsan isbedel wayn, waxaa jira daraasiin maamulka caadiga ah iyo qabqablayaasha la bixiyo mushaaraadka fantastic. Ceeb ma aha in isagoo maamule wanaagsan ama xafiis. labada Waxaan u baahanahay. Laakiin halka laga yaabaa in ay helaan baakadaha mushaharka toosaa, ay daruuri ma aha kasbadeen doonaa iyaga.
Related: 'Abuuray' Wealth waxaa la dhacayo dadkeenna ugu wax soo saar | George Monbiot
Natiijada sahan CIPD ayaa muujiyay sida ay waxyeello waxay noqon kartaa in ay bixiyaan madaxda wax badan ka badan dadka kale. Lix ka mid ah 10 shaqaalaha ayaa sheegay in ay gaabis dareemay by farqiga u badan ee mushaarka; 70% ayaa sheegay in mushaar fulinta ahaa mid aad u sareeya ee guud, inkasta oo kaliya 44% ayaa sheegay in Tababaraha kooxda ee ganacsi gaar ah oo ay aad u badan ayaa la qaadan; ka badan kala badh ayaa sheegay in sumcadda ganacsi ayaa la yeelay by xad-dhaaf ah.
quraafaad ah ee hoggaanka ayaa sidoo kale soo gaaray by fikradaha caanka ah ee ku saabsan dunida ka mid ah cayaaraha. Madaxda sugan in arrinta sameeyo. More ama ciyaartoyda Chelsea isla guuleysatay Premier League xilli ciyaareedkii hore ka yar ayaa ka mid ibixi oo ay sameeyeen xilli ciyaareedkan. Oo sabab weyn oo burburkii this u muuqataa in ay dabeecad miskiin ah xulka ka mid ah, xanaajiyeen by lala yaabo ah, oo mararka qaarkood dhaqanka xun ee ay hadda Tababaraha kooxda laga ceyriyay, Jose Mourinho.
Laakiin Mourinho muuqata u dhinteen uu caddooyinka u gaar ah, Mu'minaadka ah Crore ah in uu ka xoogbadanyahay oo runtii isku hallayn karo "mid gaar ah" a. tababarayaasha Sports, si kastaba ha ahaatee adag, Si kastaba ha ahaatee adkaa, u baahan tahay in la xasuusto in ay tahay ciyaartoyda garoonka ku guuleysta ama laga badiyo kulan. Maxaa yeelay, dhammaan in kamaradaha tv-ga ka sii go'an on keydka halkaasoo maamulayaasha waxay ku fadhiistaan, iyo in Mozilla in ay qabsadaan dhifasho kasta oo dareen-dareen, ciyaartoyda shuqulka hawsha u sameeyo.
Waa maxay samayn madaxda wanaagsan samayn? Waxay soo kiraystaan ​​dadka awood u, oo ha u hesho on la shaqadooda. Waxay abuuraan meel taas oo ay shaqaalaha ku barwaaqoobi karaa. Waxay soo dhaweeyo intii macquul ah. Waxay diirada tamartaa ay ku qaadan go'aanada weyn midig. Tani ma aha mid fudud oo u qalmaa credit. Laakiin sida badan?
markeliya 100 shirkadaha, iyo taliyayaal PR ay, mararka qaar ay sheegayaan in "ordaya" shirkada weyn waa hawl weyn, oo iniinahoodu ku dhex jiraan xaq mushahar weyn. Laakiin sida Sir Philip Hampton, tiradaasi ganacsiga Marexaan iyo guddoomiyaha Rafaa Pharma ka GlaxoSmithKline, sheegay Centre Pay Sare sanadkan bigness in ay daruuri ma tilmaamayso CEO uu u qalmo abaal weyn. "The nidaamka weyn, ayaa in ka badan nidaamka dacwadood, halkii qofka ugu sareysa waxaa ka mid ah,"Ayuu yiri.
mid ka mid No waa lagama maarmaan. Madaxda Great mararka qaarkood loo gaaro wax cajiib ah, iyo qalmaan ay (dhaqaale) guul. Laakiin way ku dhowaad marnaba waxyaalahaas gaaro on iyaga u gaar ah. Steve Jobs, ciidan ka dambeeya Apple, ma ahaa tiknoolajiyadda. Sir Alex Ferguson marnaba dhaliyay goolka ah Manchester United.
Bertolt Brecht, in gabay Su'aalaha uu weydiiyay by Shaqaalaha a yaa Reads, meel kaga dhacay qaar ka mid ah sheekooyin of tirooyin taariikheed weyn ee habkan:
"Da'da yar Alexander The guulaystay Hindiya.
On isaga u gaar ah?
Kaysar adkaaday Gauls ah.
Ma uu xataa aan haysan cunto kariye isaga la?
Philip of Spain ooyay markii uu Armada hoos ugu tegey,.
Ma nin kale u ooya?
Frederick Great ku guuleystay dagaalkii toddoba sannadood ah.
Yaa kale oo ku guuleystay?
Bogga kasta guul.
Yaa la kariyey iidda dabaal?"
Waxaan nahay oo dhan in this wada. Taas waxaa ka mid ah tababaraha. Waxay mudan yihiin waxaa laga yaabaa in ay lacag ka badan inta kale oo naga mid ah. Laakiin, hubaal, ma si ka badan.
← Anigu ma aan galmo ka badan 10 sano aragti hidde New in fahamka sirdoonka aadanaha waddo laga yaabaa in habka →